Home Wararka Ganacsatada beesha Sacad oo cadaadis ku saartay Rooble inuu u safro Kenya...
Ganacsatada beesha Sacad oo cadaadis ku saartay Rooble inuu u safro Kenya si Qaadka loo fasaxo
Ganacsatada ka soo jeeda beesha Sacad oo inta badan ka ganacsan jirtay Qaadka laga keeno dalka Kenya ayaa cadaadis xoogan waxa ay saareen RW Rooble in uu safar shaqo ah ku tago dalka Kenya.
Qoor Qoor iyo Cabdikarin Xuseen Guuleed ayaa hoyga uu ka degan yamah magaalada Muqdisho ugu tagay Madaxii hore ee Galmudug Xaaf kaasoo ah ganacsada ka ganacsada Jaadka waxaana kulanka soo agaasimahay Hoggaankii hore ee Galmudug Cabdikarin Guuleed kaasoo ballan qaaday in uu ku qasbi doono Rooble in uu tago Kenya si loo furo Qaadka.
RW Rooble ayaa codsi u dirsaday madaxda Dalka Kenya isaga oo ka codsaday in uu safar shaqo ku tago dalka Kenya isaga oo sidoo kale codsaday in uu la kulmo Madaxweyne Uhurru Kenyatta.
Safarka oo uu Rooble doonayay in uu dhaco asbuucii hore ayaa dowlada Kenya si dadban uga cudurdaaratay. Rooble ayaa dhankiisa u cadeeyay madaxda Kenya in uu deg deg u fasaxayo qaadka mar hadii la soo ogolaado codsigiisa safarka Kenya.
Dhanka kale dowlada Kenya ayaa raadinayso Sida sharciga ah ee uu mas’uul Soomaali ah uu ku imaan karo daka Kenya mar hadii labada dal ayan lahayn xiriir dibloomasiyeed. Labada dal ma laha safiiro ka dhex shaqeeyo labada dal.
Waxa iyadana wali muuqan in RW Rooble uusan lahaynin awood uu gorgorton siyaasadeed uu kula gali karo dalka Kenya madaama awoodaas ay gacanta wali ugu jirto Farmaajo oo aan rabin in uu xiriir la sameeysto dalka Kenya.
Caqabadaha kale ee jira ayaa waxa kamida in qaar kamida mas’uuliyiinta Soomaalida ay ku jiraan Fahad Yasin, Cabdiraxman Dhere iyo qaar kamida Qoyska Farmaajo loo haysto danbiyo la xiriira in ay dalka kenya ka abaabulayeen dagaal sokeeye ka dib markii gacanta lagu dhigay cadeeymo muujinaya in Fahad iyo Farmaajo ay wax ka ogaayeen qorshaha dhibka looga gaarsiinayo daka Kenya.
Rooble ayaa sharci deganaansho ku leh daka Kenya, hantina uu ku leeyahay magaalada Naiorbi.
Si kastaaba dowlada Kenya ayaa laga yabaa in ay fasax siiso Rooble in uu yimaado daka kenya, waxaana laga yaabaa in fursadaas timaado maalinta Axada ee fooda nagu soo haysa.